Ayhuudonni Itoophiyaa Tel Aviiv keessatti hiriira mormii guddaa taasisan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Ayhuudonni Itoophiyaa Tel Aviiv keessatti hiriira mormii guddaa taasisan
Hacuuccaa, loogii sanyiifi rakkoo diinagdee yeroo dheeraadhaaf wolirratti kuufametu Ayhuudota Itoophiyaa akkas dallansiisee daandii Tel Aviiviifi Iyyeruusaleemii irratti baase jedhama.
Ayhuudonni Itophiyaa (Beta Israa’el ykn Falaashaa) kumaatamatti laakawaman hiriira mormii guddaa magaalaa Tel Aviiv keessatti geggeessan. Hiriirichi dhumarratti gara hookkaraatti geeddarame. Beta Israa’eloonni (Ethiopian Jews) baay’inaan daandii Tel Aviiv irratti bayuudhaan loogii sanyiifi miidhaa poolisiin Israa’el yeroo dheeraadhaaf isaan irraan gayaa ture mormaniiru. Hiriirri kuni gara jalqabaa irratti naga turus, aariin, dallansuufi komiin Beta Israa’eloonni Poolisiifi mootummaa biyyattii irraa qaban kan yeroo dheeraadhaaf wolitti kuufamaa ture daandii Tel Aviiv irratti danfuudhaan hookkaraaf sababa ta’eera.
Ummanni hiriira baye daandii konkolaataa cufuudhaan sochii geejjibaa irratti danqaa uumaniiru. Konkolaataan poolisii irra hubaatiin gayeera. Foddaalee manniiniis hangi tokko caccabaniiru. Hokkarri akkanaa yeroo dheeraadhaaf Tel Aviiv keessatti ka’ee hinbeeku jedhama.
Poolisiin kanniin hookkara kaasan tasgabbeessuudhaaf bishaaniifi aaratti dhimma bayeera. Hanga ammaatti poolisiin 56 fi kanniin hiriira irratti hirmaatan keessaas namoonni 12 madaayuun gabafameera. Namoonni 19 ammoo hidhamaniiru.
Muummichi Ministera Israa’el Benyaamiin Netneyaahoon miseensa raayyaa woraana biyyattii Damaas Pakadaa, isa poolisootaan haleellaan cimaan irra gaye, Wixata waajjira isaatti akka dubbisu beekameera.
Beta Israa’eloonni %1 ummata Israa’el akka ta’aniidha kan himamu. Kanniin mana hidhaa Israa’el jiran keessaa %30 Beta Israa’eloota, garuu.
Guyaa muraasa duras hirriirri nagaa magaalaa Iyyeruusaleem keessatti geggeeffame jeequmsaan xumuramuun isaas niyadatama.
Ummanni Beta Israa’el sanyii Ayhuudaa qaban jedhaman gara Itoophiyaatti akkamitti dhufan kan jedhuuf yaada gurguddaa lamatu jira: hariiroo mooticha Salamoniifi mootitii Saabaa jidduu ture irraa uumaman isa jedhuufi isa baqaan gara Itoophiyaatti dhufan jedhuudha.
Previous articleLencho Leta: Individual and group rights: a dichotomy or a duality?
Next articleItoophiyaan imala gara dimokraasiitti gootuun karaa dheeratu hafaaf, jetti Wendy R. Sherman